बजेट घोषणा गर्दा उल्लेख गरेका विषय आजबाट कार्यान्वयन:करमा नयाँ दायरा कति कमाउनेलाई कति कर ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बजेट घोषणा गर्दा उल्लेख गरेका विषय आजबाट कार्यान्वयन:करमा नयाँ दायरा कति कमाउनेलाई कति कर ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आज पहिलो दिन । आजबाट सरकारले ल्याएको नयाँ नीति तथा बजेट अनुसार सरकारी कामकारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछन । योसँगै आजैबाट हामीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व पनि हेरफेर हुनेछ भने सरकारले बजेट घोषणा गर्दा उल्लेख गरेका विषय आजबाट कार्यान्वयनमा आउने छन्।
त्यसमा पनि आम सर्वसाधारणको चासोको विषय हो सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर । हामीले जागिर खानेले नियमित मासिक रुपमा अनि उद्योगी व्यापारीले उद्योग व्यवसाय नवीकरण गर्दा वार्षिक अर्धवार्षिक रुपमा आम्दानी कर बुझाउने गरिन्छ ।
यसरी बुझाउने आम्दानी करको दायरा पनि आजबाट नयाँ हुने छ । ‘आर्थिक विधेयक २०७६’ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने आयकरको अवस्था यस्तो छ:
सरकारले विवाहित र अविवाहितका लागि बेग्लाबेग्लै करको दायरा तय गरेको छ । जस अन्तर्गत अविवाहितहरुले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको कमाईमा १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा १० प्रतिशतको दरमा थप १ लाखको १० हजार गरी १४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशतका दरले थप ४० हजार गरी ५४ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ७ लाख २० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले थप ३ लाख ९० हजार गरी ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
विवाहितहरुका लागि करको दायर थोरै फराकिलो बनाइएको छ । ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म थप १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी १४ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ । ५ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा थप २० प्रतिशतका दरले ४० हजार गरी ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । २० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ । यसको अर्थ २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । -खबरहब
सिड्नीमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०३ औँ जन्म जयन्ती मनाईयो।
महेश्वर शर्मा सिड्नी अष्ट्रेलिया ,सिड्नीमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०३ औँ जन्म जयन्ती मनाईएको छ।नेपाली कला, […]
निर्मलनिवास दुई दिनदेखि खाली,नेपालगन्जमा दरबारको दलबल
काठमाडौं । निर्मलनिवास दुई दिनदेखि खाली छ । राजपरिवारका केही सदस्यबाहेक कोही छैनन् । दरबारका सदस्य र […]
पेट्रोलियम पदार्थमा कमिसन बढाउन व्यवसायीको दबाब
असार १२,काठमाडौं ।—पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने क्षति (प्राविधिक लस) को मात्रामा कमिसन बढाउन […]
प्रधानमन्त्री अोली मन्त्रीमण्डल विस्तारबारे छलफल गर्दे, १८ मन्त्रालय राख्ने तयारी
काठमाडाैं । एमाले माओवादीको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्ने तयारी गरेका […]
संखुवासभामा छ नाबालिका र चार महिला बलात्कृत
चैत ११ । संखुवासभा,आठ महिनाको अवधिमा संखुवासभाको बिभिन्न गाँउमा १० जना महिला तथा बालिका बलात्कृत भएका छन् […]